Ukukhethwa kweempawu, i-AutoCAD-Microstation-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukukhethwa ngeempawu, AutoCAD - Microstation
Ukukhethwa kweempawu yindlela yokucoca izinto ngokwemiqathango ekhethekileyo, zombini iMicrostation kunye ne-AutoCAD ziyenza ngendlela efanayo, nangona enye yezi nkqubo inezinye izinto ezisebenzayo, kwimeko yesi sixhobo. Ndisebenzisa lo mzekelo AutoCAD 2009 y Microstation V8i.
Oku kusebenze ngomyalelo qselect, okanye nge icon ekunene yeepaneli zecala lamacandelo.
Kwi-AutoCAD 2009 kufuneka uyikhangele, kulungile kwizinto ezincedisayo, sele ukhethe ithebhu yasekhaya.
Xa ukhethwe, iphaneli iboniswa evumela:
-Sebenzisa ukhetho kumzobo wonke okanye ukhetho olukhethiweyo
- Khetha uhlobo lwezinto (umgca, isangqa, itekisi, njl.).
-Sichaze imeko yomdlalo usebenzisa abasebenzisi
-Faka umbala, uboniswe njenge inani
Kwaye ke kunokwenzeka ukongeza ukhetho kwisethi entsha okanye iqoqo ekhoyo.
Ukongezelela, kuyavakala ukuba kunokwenzeka ukuba ukhethe izinto ezivela kwitheyibhile yepropati leyo, nangona ayinayo imisebenzi eninzi kule njongo, ngokuqhelekileyo isetyenziswa ekukhetheni izinto ezikhethiwe ngaphambili.
Kukho nezinye iindlela zokukhetha, ezenzekayo ngoku ngeRibhoni andizifumani ngokulula. Kodwa inokwenziwa kwi-bar yomyalelo, singena kumyalelo othi "khetha", emva koko ungene, emva koko uphawu, emva koko ungene. Oku kuya kusinika ezinye iindlela zokukhetha i-AutoCAD enazo nangona ingezizo izihluzi, ziluncedo. Nangona ukuyithelekisa, kuya kufuneka siqwalasele okwenziwa yiMicrostation ngokhetho lwento.
Umyalelo usebenze "Hlela / khetha ngeempawu".
Nangona iphaneli ifana ne-AutoCAD kukho iindlela ezingakumbi zokukhethwa njengale:
-Ukuzibandakanya kwamanqanaba (izalathisi), oku kusebenza ngokudonsa okulula okanye ukusebenzisa ctrl o shift.
-Iindidi ziphantse zafana ne-AutoCAD, nangona ivumela iintlobo ezingama-22 xa kuthelekiswa ne-12 evumayo. Ngokukwanjalo, ukhetho lunokuba ngokutsala ngokulula, kwaye zinokubakho iintlobo ezininzi ngaxeshanye ngelixa une-AutoCAD inye kuphela ngexesha. Ngenxa yoko, i-AutoCAD isebenzisa ukusebenza kokongeza izinto kwingqokelela.
-Iyakwazi ukucoca idatha yesimboli, kwimeko i-AutoCAD ivumela kuphela umbala, i-Microstation ivumela isitayela kunye nobukhulu bomgca.
-Izibonelelo ze-inclusion okanye zokukhutshwa, zombini iinkqubo ziyafana
-Unomdla omnye ongakhetha kuzo, okanye ukufumana, kunye nale ntengiso ihamba apho izinto ziboniswa khona.
-Kuba kukho ukhetho lokukhetha ukuba luphelile okanye luya (nge / / luvaliwe)
-Iqhosha "lidlula" lenza isenzo, ngexesha elifanayo kukho amabhinqa amabini avumela ukujonga ezinye iipropati zokucoca
Iindlela zokusebenza zifana ne-AutoCAD (elinganayo, enkulu, encinci njl njl.) Kwaye iqhutyelwa kwiqhosha eliphantsi "Tags", Kodwa ngeemeko ezinokuthi zongezwe ngexesha elifanayo zisebenzisa abasebenzisi"kunye, okanye"
Kwaye i-chascada, enhle kakhulu, "izixhobo / khetha kwizintoUnokukhetha iipropathi zento ethile kumzobo. Oku kuyenzeka kakhulu kuba isetyenziswa kwimeko apho ufuna ukukhetha zonke izinto ezinepropathi yento ethile; Kulula kuba endaweni yokuqikelela iipropathi, khetha enye kwaye inokwandiswa iye kwiindidi ezininzi zezinto okanye yongeze ezinye iimfuno.
Ungagcina kwakhona imilinganiselo njengefayile ye .rsc kwaye uyibize ngelinye ixesha.
Emva koko kwizicwangciso ungacacisa ezinye iimpawu ezigqithisileyo ezifana neepropati zefonti okanye amagama e-block (iiseli)
Kuyafana kuzo zombini iinkqubo, umbandela wokuziqhelanisa nokuzisebenzisa okanye ukubandezeleka. Ayizukubi ukuba i-AutoCAD iphucule oku kusebenza kancinci.
Geofumed, izifiso zesikhashana
Ndicinga ukuba i-Microstation J yenza ukuhlunga okufanayo. Nangona andinayo ukubonisa.
Hector Aguilar uthi:
Ndazama ukucoca kwi-microstation j, kodwa andinakuyifumana indlela yokwenza oko, into endiyidingayo ukucoca itekisi okanye ibhloko
Inqaku elihle kakhulu, linconywa kubasebenzisi abaye bavela kwi-Autocad ukuya kwi-Microstation.